गोपनीयता नीति | यो शरणार्थी केन्द्र अनलाइन गोपनीयता नीति | शरणार्थी केन्द्र अनलाइन
आफ्नो गोपनीयता हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण छ.
यो शरणार्थी केन्द्र अनलाइन आफ्नो गोपनीयता पक्षहरूमा.
आफ्नो अधिकार संरक्षण गर्ने प्रतिबद्धता देखाउन, हामी हाम्रो वेबसाइट को प्रयोग मार्फत हामी तपाईं हामीलाई प्रदान जानकारी व्यवहार कसरी व्याख्या गर्न यो गोपनीयता नीति सिर्जना. यो नीति कुनै पनि समयमा परिवर्तन हुन सक्छ, जो मामला संशोधित गोपनीयता नीति जानकारी लागू हुनेछ हामी मिति पछि संशोधित गोपनीयता नीति पोस्ट प्राप्त.
यस गोपनीयता सूचना लागि गोपनीयता अभ्यासहरू discloses (वेबसाइट ठेगाना). यस गोपनीयता सूचना यो वेबसाइट संकलित जानकारी केवल लागू. यसलाई निम्न सूचित गर्नेछौं:
के व्यक्तिगत रूपमा पहिचान जानकारी वेबसाइट मार्फत बाट संकलित छ, यसलाई प्रयोग गरिन्छ र कोसँग साझेदारी हुन सक्छ कसरी.
तपाईंको डाटा प्रयोग सन्दर्भमा के विकल्प छन् उपलब्ध.
ठाउँमा सुरक्षा प्रक्रियाहरु तपाईंको जानकारी दुरुपयोग रक्षा गर्न.
तपाईं जानकारी कुनै पनि inaccuracies कसरी ठीक गर्न सक्नुहुन्छ.
सूचना संग्रह, प्रयोग, र साझेदारी
हामी यस साइटमा संकलित जानकारी को एकमात्र मालिक छन्. हामी मात्र / पहुँच जानकारी सङ्कलन तपाईंले स्वेच्छाले तपाईं इमेल वा अन्य प्रत्यक्ष सम्पर्क मार्फत हामीलाई दिनको. हामी बेचन छैन वा जो कोहीले यो जानकारी भाडामा.
व्यक्तिगत रूपमा पहिचान जानकारी कुकीहरू
हाम्रो वेबसाइट तपाईंको प्रयोगको सम्बन्धमा, हामी कहिलेकाहीं यस्तो तपाइँको IP ठेगाना र तपाईंले भ्रमण वेब पृष्ठहरू रूपमा बारेमा व्यक्तिगत रूपमा पहिचान जानकारी सङ्कलन. हामी पनि आफ्नो कम्प्युटरमा "कुकीहरू" पठाउन सक्छ. एक "कुकी" हामीलाई दोहोरिने आगंतुकों पहिचान गर्न मद्दत गर्छ कि एउटा सानो पाठ फाइल आफ्नो हार्ड ड्राइभमा आफ्नो कम्प्युटर पठाइएको र भण्डारण छ, यस्तो पढ्न र सिक्न रुचि के भाषाहरू रूपमा प्रत्येक आगन्तुक गरेको चालु पहुँच र हाम्रो साइट को प्रयोग सुविधा, र ट्रयाक उपयोग व्यवहार. हामी तपाईंको ब्राउजिङ अनुभव बृद्धि गर्न "कुकीहरू" प्रयोग र अन्य गैर-व्यक्तिगत रूपमा पहिचान जानकारी सङ्कलन.
सम्पर्क र / वा तपाईँको अनुरोध सुनिरहेका
हामी तपाईंलाई प्रतिक्रिया आफ्नो जानकारी प्रयोग गर्नेछ, कारण सन्दर्भमा हामीलाई सम्पर्क. हामी हाम्रो संगठन को बाहिर कुनै पनि तेस्रो पक्ष आफ्नो जानकारी साझेदारी छैन, तपाईंको अनुरोध पूरा गर्न आवश्यक नभएसम्म, यस्तो स्नातक पाठ्यक्रम मा भर्ना रूपमा.
जबसम्म तपाईं हामीलाई सोध्न, हामी हाम्रो कार्यक्रम बारेमा बताउन भविष्यमा इमेल मार्फत सम्पर्क गर्न सक्छ, कक्षाहरू, शरणार्थी resettlement अद्यावधिक, र / वा यस गोपनीयता नीति अद्यावधिक.
आफ्नो पहुँच र नियन्त्रण जानकारी माथि
तपाईं कुनै पनि समयमा हामीलाई कुनै पनि भविष्यमा सम्पर्क बाहिर निस्कन सक्छ. तपाईं हामीलाई सम्पर्क गरेर कुनै पनि समयमा निम्न गर्न सक्नुहुन्छ: privacy@therefugeecenter.org.
तपाईं हामीले कुन कुरा डाटा हेर्नुहोस्, कुनै पनि यदि.
परिवर्तन / सही / मेटाउन कुनै पनि हामी तपाईंलाई बारेमा छ डाटा.
कुनै पनि तपाईंको डाटा हाम्रो प्रयोगको बारेमा छ चासो व्यक्त.
हामी तपाईंको जानकारीको रक्षा गर्न सावधानीहरु लिन. जब तपाईं वेबसाइट मार्फत संवेदनशील जानकारी पेश, तपाईंको जानकारी सुरक्षित छ दुवै अनलाइन र अफलाइन.
जहाँ हामी संवेदनशील जानकारी सङ्कलन (जस्तै क्रेडिट कार्ड डाटा रूपमा), जानकारी सुरक्षित तरिका हामीलाई गुप्तिकरण गरिएको र प्रसारित छ. तपाईंले ठेगाना पट्टीमा लक आइकन लागि देख र देख द्वारा यस प्रमाणित गर्न सक्नुहुन्छ “https” वेब पेज को ठेगाना को सुरुमा.
हामी सुरक्षा गर्न गुप्तिकरण प्रयोग गर्दा संवेदनशील जानकारी अनलाइन प्रसारित, हामी पनि आफ्नो जानकारी अफलाइन रक्षा. कर्मचारीहरु जानकारी आवश्यक मात्र विशिष्ट काम गर्न (जस्तै, शिक्षा पाठ्यक्रम) व्यक्तिगत रूपमा पहिचान जानकारी पहुँच प्रदान गर्दै.
तपाईं कुनै पनि प्रश्न छ वा यदि लाग्छ भने हामी यस गोपनीयता नीति पालन छैन, तपाईं मा इमेल मार्फत तुरुन्तै हामीलाई सम्पर्क गर्नुपर्छ: privacy@therefugeecenter.org.